Itoobiya Oo ku dhawaaqday iney Soo gebegebeysay dhisida Aasaaska biya Xireenka An-Nahda. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Itoobiya Oo ku dhawaaqday iney Soo gebegebeysay dhisida Aasaaska biya Xireenka An-Nahda.
Last updated May 5, 2020 346 0
War kasoo baxay dowladda Itoobiya ee uu hogaamiyo Abey Axmed ayaa lagu sheegay in dowladdu ay soo gebegebeysay dhisida aasaaska biya xireenka An-Nahda, taasi oo suuragelin doonto in biya xireenku uu keydiyo biyo badan.
Sida ay sheegeyso dowladda Itoobiya, keydadka biya xireenka ee hadda la sameeyay, howshoodana lasoo afjray waxay keydin karaan qiyaastii Afar billion oo meter saddex jibaaran, waxaana ay kusoo aaday iyadoo ay roobabku si wanaagsan u da’ayaan.
Inkastoo uu Caalamku dhibaato ba’an ku hayo Coronavirus, hadana howsha biya xireenka An-Nahdi ayaa si dhaqsi ah ku socota, waxaana hadda ay shaqaalaha biya xireenka billaabeen iney geedaha ka jaraan masaaxo dhan Kun hekctar.
Waxaa dhinac kale aad usii socda ololaha ay dowladda Itoobiya dhaqaale ugu raadineyso mashruuca biya xireenka An-Nahda, kaas oo ay u xamaasad qabaan shacabka wadankaas, waxayna dowladdu sheegeysaa in hadda ay uruurisay lacag dhan 16 million oo doollar, taasi oo muujineysa sida Itoobiyaanka ay uga mideysanyiiin qadiyadda biya xireenka An-Nahda.
Haweeney u hadashey gudiga is xilqaanka ee ka qeyb qaadanaya dhisida biya xireenka An-nahda ayaa sheegtay in shacabka Itoobiyaanka ay dareemayaan in mashruucan uu barwaaqo u horseedi doono, sidaas darteedna ay si firfircoon uga qeyb qaadanayaan.
Dowladda Itoobiya iyo shacabkeeda ayaa aad uga hor yimid wadahadallo saddex geesood ahaa oo ka dhacay dalka Maraykanka, waxayna Ameerikaanka ku eedaynayaan iney la safteen Masar, taas oo marka waaqica loo yimaado ah mid aaney waxba ka jirin.
Masuuliyiinta dowladda Itoobiya waxay sheegayaan in dhisida biya xireenka An-Nahda ay tahay mid aan hadal la gelin karin, dowladuna ay kusii socon doonto, wax weliba oo culeesyo ah oo yimaada.
“Arinka la xiriira biya xireenka An-Nahda ma ahan oo keliya horumar, balse waa arin ku xiran nolosheena” ayuu yiri masuul Itoobiyaan ah oo la hadlay wakaaladda rasmiga ah ee Itoobiya.
Madaxweynaha dalka Masar ninka lagu magacaabo Cabdil-Fataax As-Siisi ayaa Aqoonyahannada iyo shacabka Masar waxay ku eedaynayaan inuu halis geliyay nolosha reer Masar oo badankood ku tiirsan biya webiga An-Niiil, markii uu tanaazulaad is xig xiga u sameeyay dowladda Xabashida Itoobiya.
Khilaafka biya xireenka An-Nahda ayaa u dhexeeya dowladaha Itoobiya, Masar iyo Suudaan, waxaana illaa hadda muuqaneysa iney ku sareyso dowladda xabashida Itoobiya oo taageero ka heleyso dowladaha reer galbeedka gaar ahaan Maraykanka.